Umhlahlandlela ocacile wokubona lonke ibhola kulo nyaka eSpain | Izindaba zamagajethi
Unobhutshuzwayo usuphenduke i- Ingcwele Engcwele ezinkampanini eziningi ezihlinzeka ngokuqukethwe okubukwayo eSpain, yize uMovistar enze izitatimende eziningi eziveza ukuthi kulo nyaka izosuka ekubhideleni amalungelo wethelevishini ebhola eSpain, sithole okuphambene nalokho, futhi lokho ithole cishe okuqukethwe okuningi kuphela. Njengoba kulo nyaka ibhola selibe nzima kakhulu kusuka bukela ku-TV online, Sizokulethela umhlahlandlela ocacile wokuthi ungayibuka kanjani iLa Liga Santander; ILigi 1,2,3; IChampions League kanye ne-Europa League.
1 Yimiphi imidlalo engingayibuka mahhala futhi imiphi ekhokhelwayo?
2 Iziteshi zokubuka iSantander League
3 Iziteshi zokubuka iLaLiga 1,2,3
4 Iziteshi zokubuka iChampions League ne-Europa League
5 Amanani nokufana kuyatholakala enkampanini ngayinye
Yimiphi imidlalo engingayibuka mahhala futhi imiphi ekhokhelwayo?
Kulo nyaka sinezinto ezintsha, futhi lokho ngukuthi iGol, isiteshi sezemidlalo samahhala esisakazwa ngeDigital Terrestrial Television eSpain, sizosakaza umdlalo LaLiga Santander Kuvulelekile futhi kumahhala ngokuphelele, impela, ayikho kule midlalo emibili engafaka noma yiliphi iqembu eliyingxenye yemincintiswano yaseYurophu, okungukuthi, iChampions League noma i-UEFA Europa League. Ngakho-ke, sikhohliwe ukubona i-FC Barcelona, ​​iReal Madrid CF, i-Atlético de Madrid, iValencia CF, iReal Betis Balompié, i-Villareal CF neSevilla FC eGol. enye yeFC Barcelona noma iReal Madrid CF
Ngokwengxenye yayo, ngokuya nge ILaLiga 1,2,3 (Isigaba sesibili saseSpain), iGol izophinda isakaze imidlalo emibili usuku ngalunye, ivumelanise amashejuli nokufaneleka kwezithameli ezithile. Kepha akuphelelanga lapho Copa SM Inkosi yaseSpain Uzoba nomdlalo wakhe ekusakazweni okuvulelekile ngesiteshi esifanayo, futhi lokho ngukuthi uGol ukwazile ukugcina uthando lwalabo bathandi bebhola jikelele noma abamane bangabi nethuba lokubona iqembu labo kuthelevishini.
Ngakolunye uhlangothi, iChampions League Izosakazwa kuphela nge-Movistar pay TV noma ezinye izindlela nezinye izinkampani ezivela ngenxa yezivumelwano. Kwenzeka okufanayo naku-UEFA Europa League, ezosakazwa ngeziteshi ezitholakala kuMovistar, yize iMediapro iqinisekisa ukuthi izosakaza eminye imidlalo esiteshini okusamele inqunywe. Into elula kunazo zonke kungaba ukuthola isivumelwano esikushiya kulesi sixhumanisi.
Ngakolunye uhlangothi, uma sifuna ukubona ibhola lomhlaba Sizokwazi ukujabulela zombili iPremier League, iBundesliga neLigue 1 eziteshini zeMovistar. Ngenkathi iSerie A yase-Italy ikhawulelwe kumakhasimende eSerie A Pass, bheka lesi sixhumanisi.
Iziteshi zokubuka iSantander League
Ku-BeIN LaLiga Sizokwazi ukubona imidlalo eyisishiyagalombili yosuku ngalunye kuLaLiga Santander, ezohlala ifaka owodwa ovela kuFC Barcelona noma iReal Madrid CF, ngaphezu komlenze wokuqala "Clásico" ozodlalwa emzuliswaneni wokuqala weLaLiga Santander. Ngaphezu kwalokho, iBeIN LaLiga izokwengeza yonke imidlalo yeCopa SM El Rey de España ngaphandle kowodwa osakazwa mahhala esiteshini seGol, kanye nakuma-semifinal nakowamanqamu azosakazwa mahhala. Sinezinye izindlela eziningi, singabona iBeIN LaLiga kulokhu kunikezwa okuvela eMovistar, Vodafone ngisho naseBeIN Connect.
Ngakolunye uhlangothi, IMovistar + igcina esiteshini sayo i-El Partidazo, umdlalo owodwa ngesonto othathwa njengomdlalo ohamba phambili weLaLiga Santander, ngokujwayelekile uzofaka iReal Madrid CF noma iFC Barcelona, ​​isiteshi esingathengwa kokubili eMovistar + naku-Orange naseJazztel. Ekugcineni siyakukhumbula lokho isiteshi seGol sizosakaza umdlalo ovulekile wosuku ngalunye.
Iziteshi zokubuka iLaLiga 1,2,3
Ngakolunye uhlangothi, isigaba sesibili saseSpain sisesiteshini seLaLiga 1,2,3 esizosakaza imidlalo eyi-10 yalolo phiko nsuku zonke, lesi siteshi siyatholakala kuMovistar + naku-Orange, Vodafone nakuzinhlaka zeBeIN Connect. Yiyona kuphela indlela yokukhetha ukubuka imidlalo yeLaLiga 1,2,3 ngale kwemidlalo emibili esakazwa obala yisiteshi seGol.
Iziteshi zokubuka iChampions League ne-Europa League
Ukumbona IChampions League eSpain kufanele sihambe ngokuzibophezela esiteshini seMovistar Champions League, ezosakaza yonke imidlalo yeChampions League kanjalo nemidlalo ye-Europa League. Kuyaphawuleka ukuthi iMovistar nayo izosebenzisa lesi siteshi ukusakaza imidlalo yePremier League, iBundesliga neLigue 1. Njengakwezinye izikhathi, uMovistar no-Orange yibo abahlinzeki abathandekayo abazokwazi ukujabulela lezi ziteshi, okuthi noma ngabe iMovistar kuphela , idlulise ngezivumelwano ezinkampanini eziphikisanayo.
Amanani nokufana kuyatholakala enkampanini ngayinye
I-Movistar: Kuzosivumela ukuthi sibuke lonke ibhola ngeBeIN LaLiga, El Partidazo, Champions League neLaLiga 123 TV ngamanani azokwehla enyuka phakathi kwama-80 € futhi i € 125 njalo ngenyangas Ngokuya ngeFiber Fusion kanye nephakeji yefoni yeselula esiyiqashayo, ngokungangabazeki inguqulo ephelele kakhulu ukuze sikwazi ukubona lonke ibhola elikhona.
Iwolintshi: Inkampani yaseFrance isivumela ukuthi sivumelane namaphakeji ahlukile ngokuya ngezidingo zethu zokubuka ibhola ngale ndlela elandelayo nokuthi bazonikani ingqikithi ye- € 27,90 ngenyanga ngentengo yamanani ethu:
I-BeIN LaLiga neLaLiga 1,2,3 kusuka ku- € 9,95 / ngenyanga
IMovistar El Partidazo ngo- € 3 ngaphezulu ngenyanga
IMovistar Champions League ngo- € 14,95 ngaphezulu ngenyanga
I-Jazztel: Isebenzisa iqhinga elifanayo ne-Orange futhi kufanele sifake amaphakheji ebhola ngezinga lethu le-fiber neselula ngamanani alandelayo:
I-BeIN La Liga ne-ElPartidazo ngo- € 7,50
IMovistar Champions League ngo- € 10
Vodafone: Ithelevishini yakwaVodafone ifaka iBeIN LaLiga neLaLiga 1,2,3 mahhala, kanti asikwazi ukufinyelela kwiMovistar El Partidazo noma kwiMovistar Champions League nganoma iyiphi indlela.
I-BeIN Connect: Ipulatifomu eku-inthanethi ye-BeIN neLaLiga 1,2,3 ibiza u- € 9,99 ngenyanga.
Lezi zonke izindlela zomhlahlandlela ocacile wokukwazi ukubuka ibhola eSpain ngaphandle kokulahlekelwa yilutho. Ngaphandle kokungabaza, iphakethe eliphelele kunawo wonke linikezwa iMovistar + ngenkathi lawo e-Orange neJazztel nawo esivumela ukuthi sibone lonke ibhola, yize senza umthethosivivinywa oyinkimbinkimbi ngokwengeziwe ngoba sengeza amamojula ahlukile. Kuyacaca ukuthi ibhola liyisicelo esibalulekile sokuheha amakhasimende ngezinsizakalo zocingo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ukuphanga » Umhlahlandlela ocacile wokubuka lonke ibhola kulo nyaka eSpain
Ososayensi baseChina benza izibungu ezikwazi ukukhiqiza usilika wesicabucabu onamandla amakhulu
Bayakwazi ukudala amaminerali akwazi ukumunca i-CO2 ekhona emoyeni